Ziron Barcelona Asphalt Bandolier Review | Vaovao IPhone
Na dia tena tiako aza ny mividy zavatra amin'ny tranokala toa ny DealExtreme na Buyincoins, izaho koa dia liana amin'ny kojakoja avo lenta, toy ny Elevation Dock izay ho tonga ao anatin'ity herinandro ity na ny kitapo soroka Ziron izay ho hitantsika amin'ity lahatsoratra ity.
1 Vokatra nasionaly
2 Volavola sy kalitao
3 Aiza no hividianana azy
Tiako ny manasongadina azy, saingy mieritreritra aho fa amin'ny fotoan-tsarotra sy ara-tsosialy sarotra iainantsika fanalahidy ny miloka amin'ny orinasa vao misondrotra an'ny firenentsika izay mampiasa vola amin'ny haitao, ary iray amin'izany i Ziron. Saingy manana vokatra tena tsara koa izy io, ary ity dia zavatra iray izay azon'ny tompon'andraikitra iray amin'ireo accessories ananany manamafy.
Ny kitapo soroka izay nahafaly ahy nanandrana sy nampiasaiko tato ho ato dia ny maodely Asphalt amin'ny loko mainty misy antsipiriany mena. Vita amin'ny leatherette izy - manome toky anao aho fa mahafinaritra ny mikasika - ary manana antsipiriany mahaliana maro izy, koa andao hojerentsika kely kokoa.
Volavola sy kalitao
Raha mila manasongadina zavatra roa momba ity kitapo soroka ity aho dia tena misafidy endrika sy kalitao. Toa nahomby tokoa ny endrika, mahonon-tena, tonga lafatra ho an'ny olona toa ahy izay mandeha amin'ny iPad ary tsy te hanao tsirambina ny fomba matotra nefa maoderina. Na ahoana na ahoana, raha be fahasahiana kokoa dia misy safidy amin'ny loko hafa toy ny fotsy.
Mikasika ny kalitao dia tsy afaka mifikitra amin'ny faritra iray fotsiny isika. Ny fanidiana magnetika dia tena mahagaga, mangina nefa mandaitra, iray amin'ireo antsipiriany manamarina ny vidiny. Ny zipera dia tena tsara - zavatra tena manandanja- ary misy paosy marobe ao anatiny ahafahantsika mitahiry kojakoja toy ny Kitan'ny Fifandraisana Camera, ny charger na ny stila. Ary avelao aho tsy hanadino, ny paosy ivelany ampidiriny dia tena ilaina amin'ny toe-javatra samihafa koa.
Aiza no hividianana azy
Raha te hividy ity kitapo soroka ity ianao dia mahavita azy avy any Redcoon, ary raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny Ziron sy ny vokatrao ianao afaka mitsidika ny tranokalany ianao, izay tsara ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ziron Barcelona Asphalt Shoulder Bag Review
Betsaka amintsika no manaraka azy ireo avy any amin'ny firenen-kafa ivelan'i Espana ary amin'ny alàlan'ny firesahana manokana amin'ny Espaniola dia manome ahy ny fiheverana fa ny sisa amin'ny tenantsika dia tsy raisina na hoe mpiditra an-tsokosoko amin'ny pejy Espaniôla isika.
Mamaly an'i Sua
Xavi Com.es dia hoy izy:
Tsy hitako ny fanamavoana any ivelan'i Espana, mampiseho antsika mpanamboatra Espaniola fotsiny io fa manana kojakoja faran'izay tsara ary koa raha misy ny toe-javatra, tsy maharary ny manohana an'i Espana ... Indraindray ianao mahita tongotra 2.000 amin'ny saka malemy mpifanila trano aminy. ..
Mamaly an'i Xavi Com.es
Cauldreon dia hoy izy:
Efa ela aho no niditra an'ity tranonkala ity ary tamin'ny fiainako dia nahita fanamavoana ireo izay tsy niditra avy any Espana na zavatra toa lazainao.
Raha any Espana no amidin'ny mpanamboatra azy, hadisoan'ny tranonkala ve izany?
Jereo izao, Google mamoaka ny Nexus 7 ary tsy afaka mividy azy an-tanana fotsiny aho satria any Eropa dia amidiny any Angletera ihany izany, tsy eropeana daholo ve isika?
Te hitaraina ianao …… ..
Valiny tamin'i Cauldreon
Mety raha tsara kokoa ny famerenanao an'io karazana io.
Hafiriana no maharitra ny iOS betas?
Ny iCade Mobile ho an'ny iPhone dia amidy ankehitriny